China CTC 2 # Nhema tii fekitori uye vagadziri | Yibin Tea
CTC YEMAHARA TIYA
CTC 2 # Nhema tii
CTC nhema tii zvinoreva tii nhema inogadzirwa nekupwanya, kubvarura nekukanya. Mashizha etii anotemwa uye anomonerwa mumapellets kuitira kuti muto wetii ubude paunobikwa. Chaizvoizvo, yega nhema tii inogadzirwa kuita CTC tii, iyo ine mamakisi akasiyana maererano nematanho akasiyana Musika mukuru unosanganisira United States, Ukraine, Poland, Russia, Turkey, Iran, Afghanistan, Britain, Iraq, Jordan, Pakistan, Dubai uye dzimwe nyika dzeMiddle East.
CTC Nhema tii
Yakapwanywa tii inodzika zvine simba, muto mutsvuku
Yakafuta, yakasimba, nyowani
4g / bhegi, 4g * 30bgs / bhokisi rechipo kurongedza
Mukutanga kwema1930, William Mckercher (William Mckercher) akagadzira muchina weCTC. Rudzi rwemuchina uyu runogona kupwanya, kubvarura, uye kumonera iwo akasvava tii mashizha panguva imwe chete. Iyi nzira yekugadzira tii, CTC, ndiyo yekutanga tsamba kubatanidza mazwi echiChirungu ematanho matatu aya.
Pekoe akapfupikiswa saP): Pekoe
Broken Pekoe (BP): Yakatemwa kana isina kukwana pekoe
Mhemberero dzakapfupikiswa seF: zvinoreva zvidimbu zvidiki zvidiki pane zvakapwanyika pekoe.
Souchong (S mapfupi): Souchong tii
Tea poda (Guruva rakapfupikiswa seD): poda yetii kana matcha
CTC nhema tii ine mavitamini akawanda, glutamic acid, alanine, aspartic acid nezvimwe zvinovaka muviri, izvo zvinogona kubatsira kugaya kwemudumbu, kukurudzira kudya, diuresis, uye kubvisa edema.
CTC nhema nhema tii haina shizha tii ruva ruvara. Yakatsemurwa tii yakasimba uye ine granular, iwo muto wakasviba bhuru uye oiri, iyo yemukati kuravira yakasimba uye nyowani, uye muto ruvara wakatsvuka uye kupenya.
Siyanisa mhando yeiyo yakaputswa nhema tii:
(1) Shape Iyo yakaputsika tii inodzivira zvakasungwa zvakasungwa, mashizha ematei tii akasunga uye akatwasuka, zvidimbu zvetii zvakaunyana uye zvakakora, uye tii yepazasi jecha, uye muviri unorema. Iwo maratidziro ezvimedu zvakaputswa, zvidimbu, mashizha, uye magumo anofanirwa kusiyaniswa. Iyo tii yakaputsika haina iyo yeupfu tii, iyo poda tii haina iyo yeupfu tii, uye iyo poda tii haina guruva. Ruvara ndere nhema kana shava, kunzvenga kuchena kana kuita yero.
(2) Ravidza: Taura nezve kuravira kwetii yakasviba yakasviba, ichinyanya kusimbisa mhando yemuto. Muto wakakora, wakasimba, uye unozorodza. Kusungirirwa ndiyo hwaro hwehunhu hweyakatyoka nhema tii, uye kutsva ndiyo mhando yemhando yekutyora nhema tii. Yakaputswa nhema tii muto inoda yakasimba, yakasimba, uye nyowani. Kana muto wacho uri wakareruka, wakasviba, uye wakare, mhando yetii yakaderera.
(3) Hwema: Iyo yepamusoro-giredhi yakaputswa nhema tii ine yakanyanya kunhuwirira, ine muchero, maruva uye hwema hwekunaka hwakafanana nejasmine. Iwe unogona zvakare kunhuwa iyo iyo kana iwe uchida kuiravira. Dianhong, iyo yakaputswa tii tema kubva kuYunnan munyika yangu, ine kunhuwirira kwakadaro.
(4) Ruvara rwemuto: tsvuku uye kupenya kuri nani, kusviba uye madhaka hakuna kunaka. Iko kudzika kwemavara uye kupenya kwevatema vatyoka tii sosi ndiko kuratidzwa kwemhando yesobho yetii, uye sosi yetii curd (mushy mushure mekutonhora) kuita kwakanakisa kwesobho mhando.
Ongororo yekumhiri kwemakungwa: Tea yekune dzimwe nyika vanhu vakajairira kuongorora nemukaka: kuwedzera mukaka mutsva mukapu yega yega yemuto wetii nechiyero chegumi chegumi chemuto wetii. Zvakawanda zvakawedzerwa hazvibatsire kutsanangura kuravira kwesobho. Mushure mekuwedzera mukaka, ruvara rwemuto unopenya pinki kana kupenya shava-tsvuku, kujeka yero, tsvuku kana kujeka tsvuku zviri nani, nhema nhema, grey grey, uye greyish chena hazvina kunaka. Iko kuravira kwesobho mushure memukaka kunodikanwa kuti ugone kugona kuravira iripachena tii kuravira, kunova kuita kweiyo gobvu tii muto. Mushure mekunge muto wetii wapinda, matama anobva angoshatirisa, kunova kupindura kune simba remuto wetii. Kana iwe uchingonzwa iwo mukaka uri pachena kuravira uye iyo tii kuravira isina kusimba, mhando yetiyo haina kusimba.
Iwe unogona kuwedzera tsvuku tsvuku uye ginger zvidimbu kuti unwe yakaputsika nhema tii. Imwai zvishoma nezvishoma pachinodziya. Iyo ine mhedzisiro yekupa chikafu mudumbu uye inoita kuti muviri uve wakasununguka. Zvisinei, hazvikurudzirwi kunwa tii tii tii.
Mushure mekubika Sichuan Gongfu nhema tii, mukati memukati mutsva uye mutsva nekunhuwirira kweshuga, kuravira kwacho kwakadzikama uye kunozorodza, muto wakakora uye wakajeka, mashizha acho mukobvu, akapfava uye akatsvuka. Icho chakanaka chinwiwa chinwiwa chinwiwa. Zvakare, kunwa Sichuan Gongfu nhema tii kunogona zvakare kuchengetedza hutano hwakanaka uye kwakanakira muviri.
Pashure: Green Tea Chunmee 8147
Zvadaro: Sichuan Congou Nhema tii
Assam Nhema Tea
Tema Dema Kune Bvudzi
Tea Dema Yakanaka Kwako
Dema Tea Upfu
Ginger Nhema Tea
Yakasununguka Shizha Dema Tea
Rose Nhema Tea
Sichuan Congou Nhema tii
Yakaputswa Nhema tii